Boxe Thaillandaise : «Mila fanohanana ny mpikatroka malagasy», hoy i Mellano | NewsMada
Boxe Thaillandaise : «Mila fanohanana ny mpikatroka malagasy», hoy i Mellano
Miatrika fiofanana, amin’izao fotoana izao, ireo mpikatroka boxe thaillandaise. Mikarakara izany, ny cosfa sy ny fihezama miaraka amin’ny klioba RKC. Tanjona, ny fampivondronana sy fampiroboroboana ny taranja.
Toy ny isan-taona, mandalo eto Madagasikara i Fabrice Mellano, «instructeur du club Tampon Muay-Thai» avy atsy La Réunion. Toy ny fanaony, manome sy mizara ny fahaiza-manaony amin’ny alalan’ny fiofanana, misokatra ho an’ny rehetra, ny tenany. Nanomboka omaly zoma, tetsy amin’ny Dojo Betongolo, izany ary haharitra hatramin’ny alahady ho avy izao. Tanjona ny hampiroborobo ity taranja ity, “Efa manana ny fahaiza-manaony ireo mpikatroka malagasy, saingy fanamafisana fotsiny sy fanomezana ireo teknika vaovao no omeko ho azy ireo”, hoy i Mellano.
Mifantoka amin’ny fandefasana ny daka sy ny lohalika ary ny totohondry ary ny fananjerana, ny mpifanandrina, mandritra ny ady eny ambony ringa, ny fiofanana. Tsy nanafina i Mellano fa manan-talenta ny Malagasy, saingy tsy ampy fanohanana ka tokony hampiana. “Io lafiny io no iavahany amin’ny mpikatroka ao La Réunion fa raha ny fomba fiady, manana ny mampiavaka azy ny Malagasy”, hoy hatrany izy.
Tsiahivina fa mikarakara ity fiofanana ity ny sampana muay-thai ao amin’ny Fihezama, miaraka amin’ny Cosfa, tarihin’ny filohany, ny kolonely Jaotiana Fernand, sy ny Me Romuald, avy amin’ny klioban’ny RKC. Tsiahivina fa handray anjara amin’ny “Festival des Arts Martiaux”, hatao etsy Mahamasina ny alahady ho avy izao, ireto mpiofana, ireto.
Marihina fa efa indroa tompondakan’i Frantsa, tamin’ity boxe thaillandaise ity, i Mellano. Nahavita ady 32 izy ka 28 ny fandresena ary efatra kosa ny faharesena.
Ankehitriny, mpanazatra an’i Manu Payet sy Florent Kawashi, tompondaka eran-tany, amin’ny kick-boxing sy ny Boxe Thaillandaise, ny tenany.